Ny fizakan-tena momba ny fizahantany dia mametraka fironana amin'ny fihaonana an-tampon'ny WTTC any Cancun
Home » Vaovao mpitsidika iraisam-pirenena » Vaovaon'ny dia momba an'i Jamaika » Ny fizakan-tena momba ny fizahantany dia mametraka fironana amin'ny fihaonana an-tampon'ny WTTC any Cancun
by Hon Edmund Bartlett, Minisitry ny fizahan-tany Jamaika
Mpanoratra Hon Edmund Bartlett, Minisitry ny fizahan-tany Jamaika
Amin'ny fampiasana ny fihaonam-be WTTC any Cancun ho toy ny teboka fanombohana, ny mpitarika fizahan-tany dia manangana ny dingana amin'ny fanarenana ny ara-dalàna vaovao.
Na inona na inona raha manatrika manokana ny tampon'isa izy ireo na mampahafantatra ny feony, WTTC dia mametraka ny dingana amin'ny fampiraisana ny indostria.
Faharetana amin'ny fizahan-tany no fantatry ny Tale jeneralin'ny WTTC Gloria Guevara, sy Edmund Bartlett, minisitry ny fizahan-tany any Jamaika. Bartlett no ati-doha ao ambadiky ny Global Fizahan-toerana momba ny fizahan-tany sy ny fitantanana krizy .
Ny zava-bitan'i Guevara dia ny nisintona ny Vovonana WTTC any Cancun ary nampivondrona ireo mpitarika ireo orinasa manan-kaja indrindra. Rehefa nandeha ny fotoana dia nahavita nitady fomba hampifandray ny sehatry ny daholobe izy amin'ny fotoana Fikambananan'ny fizahantany manerantany (UNWTO) tany Madrid dia naneho fahalemena lehibe.
Bartlett dia tompon'andraikitra amin'ny fanjakana misy fitaomana lehibe. Amin'ity lahatsoratra ity dia manazava ny fomba hampiroboroboana ny indostrian'ny fizahantany aorian'ny COVID izy, ary ity dia mety hanangana ny dingana amin'ny fihaonana an-tampon'ny WTTC any Cancun.
Ny Hon. Minisitry ny fizahantany Edmund Bartlett, a Maherifo momba ny fizahantany ny Tambajotra fizahan-tany manerantany, dia afaka nahita an'izao tontolo izao tamin'ny ankapobeny fa tsy tamin'ny fomba fijery eo an-toerana ihany. Raha tsy nisy ny fitarihana mahomby tao amin'ny minisiteran'ny fizahantany eran-tany (UNWTO) dia afaka nameno io foana io ny minisitry ny fizahantany manerantany (UNWTO).
Amin'ny ho avy Filankevitry ny fizahantany sy fizahan-tany manerantany Fihaonana an-tampony any Cancun, mametraka ny dingana sy ny fironana ilaina hitarihana an'izao tontolo izao amin'ny fananganana ny ara-dalàna vaovao ho an'ny sehatry ny fizahantany ny mpitarika. Tsy misy dikany izay manatrika ara-batana ilay fihaonana an-tampony, fa ny lanja ara-panoharana dia goavana tokoa hanentanana ny mpitondra hiray hina.
WTTC dia mampiseho ny fahaizan'ny fizahan-tany maneran-tany. Antenaina fa ny tampon'ny fihaonambe Cancun dia ny fitohizan'ny dingana fanarenana mahery vaika ho an'ny indostrian'ny fizahantany sy fizahantany
Ity no nolazain'i Hon. Edmund Bartlett dia nanoratra ho an'ny Jamaica Gleaner androany ary nanao izany eTurboNews.